Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny media sosialy toy ny maherifo! | Martech Zone
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny media sosialy toy ny maherifo!
Alakamisy, Jolay 28, 2016 Douglas Karr
Ireo mpivarotra dia manohy mahita vokatra tsara amin'ny haino aman-jery sosialy amin'ny fananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika, familiana fiovam-po ary fananganana fifandraisana amin'ireo prospect sy mpanjifa. Tsy azoko antoka fa indostria tokana manakaiky ny fahitana ny fiatraikany lehibe ateraky ny media sosialy izay hitan'ny mpivarotra hetsika.
Rehefa afaka miditra amin'ny haino aman-jery sosialy ianao hananganana fahatsiarovan-tena, ny namana mizara ny hetsika amin'ny namana hafa dia mitarika fifamoivoizana tsy mampino. Ary rehefa eo amin'ny hetsika izahay, ny fizarana ny zavatra niainantsika dia manampy anay hanoratra ireo fahatsiarovan-tena ireo, hizara azy ireo amin'ny Internet amin'ireo olona izay manana eritreritra faharoa ny tsy handehanana (amin'ity indray mitoraka ity), ary hanohy hanana fahatsiarovan-tena.
Facebook dia mamokatra "tiako" 4 tapitrisa isaky ny iray minitra, ary ny Twitter dia mirehareha tweet 500 tapitrisa isan'andro isan'andro. Ireo antontan'isa vao tsy ela akory ireo dia mampiseho fa mahery tokoa ireo sehatra ireo isan'andro, ary mamorona ihany koa ny fotoana ahafahana mamorona fifandraisana ara-tsosialy misy dikany miaraka amin'ny hafa matihanina amin'ny hetsika, mpikarakara, mpandahateny ary izay mety ho mpanatrika. Tsy misy matihanina amin'ny hetsika tokony tsy hiraharaha ireo sehatra ireo, satria ny fahefana tazonin'izy ireo dia tsy voavidim-bola hamoronana sy hamarotana hetsika mahomby. Maximillion mpamorona hetsika
Maximillion namoaka an'ity sary ity, Ireo maherifo ara-tsosialy dia manolotra Marketing amin'ny hetsika hanampy ny mpivarotra hampiasa ny fahefan'ny haino aman-jery sosialy alohan'ny, mandritra ary aorian'ny hetsikao. Ny infographic dia mamaky paikady ho an'ny tambajotra sosialy tsirairay:
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny Facebook - Mamorona pejy hetsika, ampiasao ny Facebook Ads hahatratrarana ireo mpanatrika isam-paritra liana, hanao fifaninanana, hanaraka manokana ary hampiditra ny tambajotrao. Azoko ampiana ihany koa fa zava-dehibe ny fizarana ny hetsika sy hamerenanao ireo vaovao farany ireo mpanatrika anao!
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny Twitter - Mamorona tenifototra hetsika tokana sy tsotra ary ampitao amin'ny alàlan'ny antoka rehetra anao, angataho ny mpandahateny hiara-miasa amin'ny Twitter Chats, hahita sy hamerina handefa resadresaka mavitrika mandritra ny hetsika, hamorona lisitr'ireo mpanohana, mpandahateny ary mpanatrika Twitter ary hanangana fifandraisana manerana.
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny LinkedIn - Mamoaha lahatsoratra momba ny hetsika, manome vaovao farany tsy tapaka momba ilay hetsika, mampiasa Direct Messaging hampiroborobo ny hetsika amin'ny tamba-jotra, mamorona pejy fisehoana ary mamorona Vondron-kira ho an'ny tambajotra sy resaka mitohy.
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny Pinterest - Mamorona torolàlana ho an'ny hetsika, mampiroborobo ireo mpanohana anao, ampio ny takelakao ao amin'ny tranonkalanao, mamorona lohahevitra sy tabilao momba ny hetsika ary mifampiresaha amin'ireo mpanaraka anao.
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny Instagram - Ampiasao ny tenifototra hetsikao isaky ny fanavaozana, zarao ny sary sy ny horonan-tsary hampiroboroboana ny hetsika, mampiantrano fifaninanana sary, mampifangaro sy mizara mandritra ny kaonty sosialy hafao, ary hampiroborobo ireo mpanohana sy mpandahateny anao.
Ahoana ny fomba hampiroboroboana ny hetsika amin'ny Snapchat - Ampiasao ireo fampisehoana tantara, mamorona fifaninanana selfie, manorata fifandraisana amin'ny hetsika, hafatrao ireo mpanaraka anao ary ataovy mivantana amin'ireo mpanatrika hetsika.
Talanjona foana aho amin'ny habetsaky ny hetsika tsy manana loharano ahazoana mampiasa media sosialy mialoha, mandritra ary aorian'ny hetsika iray. Mampientanentana indrindra rehefa mahazatra ny hetsika ataonao! Azonao atao ny mamorona faniriana sy fizarana angovo tsy mampino mandritra ny hetsika… ary azo antoka fa hisoratra anarana amin'ny manaraka ny vinavina aorian'ny hahitana ny zavatra tsy azony!
Raha toa ka tonon-taonina avokoa izany rehetra izany, dia miasà mpilatsaka an-tsitrapo vitsivitsy! Mahagaga ao amin'ny haino aman-jery sosialy ny Interns sy ny mpianatra ary matetika tsy manam-bola hanatrehana ireo hetsika tian'izy ireo. Ny varotra lehibe dia ny fanomezana fidirana maimaim-poana sy lobaka mpiasan'ny hetsika iray mahafinaritra ary avelao hivoaka amin'ny media sosialy izy ireo!
Tags: hetsika marketingFacebookInstagramLinkedInPinterestfampiroboroboana hetsika amin'ny media sosialysnapchathaino aman-jery sosialymarketing amin'ny hetsika sosialyfampiroboroboana ny hetsika media sosialyTwitter